Fihanaky ny valanaretina ao Toamasina: nalevina avy hatrany i Kasaona Roger, matin’ny Coronavirus | NewsMada
Vaovao lehibe nanaitra ny vahoaka Malagasy. Nodimandry, ny asabotsy teo tamin’ny 10 ora alina i Kasaona Roger. Lavon’ny coronavirus rehefa notsaboina tao Toamasina ny tenany ary Malagasy voalohany tsy afa-bela tamin’izany tao anatin’ny roa volana mahery.
Nodimandry rehefa nivahiny 59 taona teto an-tany i Kasaona Roger. Tsy niandry ela fa nalevina avy hatrany, omaly hariva, ny nofo mangatsiakany rehefa voamarin’ny mpitsabo ao amin’ny hopitaly CHU Morafeno, Toamasina, fa maty noho ny Covid-19 ity raim-pianakaviana avy etsy Tanamakoa ity. « Manana aretin’ny tosidra sy voan’ny diabeta koa izy. Anisan’ireo roa any Toamasina nahina mafy io mpiandry ny toeram-piantsonan’ny hopitaly io », hoy ny eo anivon’ny CCO foibe, tamin’ny fampahafantarana izany ho an’ny vahoaka malagasy.
Nanamafy izany ny iray tampo aminy, i Jeannette, fa nampidirina tao amin’ny Hopitalibe izy noho ny aretina diabeta mitaiza azy. « Nafindra tao amin’ny hopitaly manara-penitra ny 9 mey teo noho ny fahitana fa misy famantarana Coronavirus izy io ary izao nodimandry izao », hoy izy.
Hipoka olona, fianakaviana, namana, fokonolona teo anoloan’ny CHU Morafeno raha vao nahare fa maty i Kasaona Roger. Mpialalao baolina kitra fahiny tao amin’ny 3FB Toamasina ary mbola anisan’ny mbola milalao ao amin’ny « veteran » ny tenany. Hentitra ny fandaminana ka olona roa avy amin’ny fianakaviana ihany no manatrika ny fampidirana ny razana anaty vatam-paty. Tsy azo entina any an-trano hiaretan-tory fa nentina avy hatrany, nalevina niarahana amin’ny mpitandro filaminana.
Tsy nisy fandraisana an-tanana
Nambaran’ny mpiray tampo aminy fa tsy nisy fandraisana an-tanana nataon’ny fanjakana nandritra ny fitsaboana rehetra natao. « Nanomboka tao amin’ny Hopitalibe ka hatrao amin’ny hopitaly manara-penitra izany. Izahay avokoa no mividy ny fanafody isan-karazany. Mbola nisy taratasim-panafody nolazain’ny mpitsabo tsy maintsy vidiana haingana ny alin’ny asabotsy fa omena azy mialoha ny amin’ny 8 ora maraina ny alahady kanefa izy maty, tsy nampiasana ilay fanafody akory“, hoy ihany i Jeannette.
Mihorohoro i Toamasina iray vohitra
Mihorohoro i Toamasina amin’ny fisian’ ity trangam-pahafatesan’olona iray noho ny Coronavirus ity izao. Tonga saina tampoka ny rehetra fa hay mahafaty tokoa ny Covid-19.
Etsy andaniny, miandry fiaramanidina manokana hakana azy hotsaboina any ivelany ny teratany filipianina iray efa marary mafy noho ny Covid-19. Voalazan’ny loharanom-baovao fa mpiasa ao amin’ny tetikasa Ambatovy izy io.
Malagasy fahadimy matin’ny Coronavirus i Kasaona
Tsiahivina fa Malagasy voalohany matin’ny Coronavirus teto an-tanindrazana i Kasaona Roger raha efa fahadimy kosa amin’ireo Malagasy matin’ity valanaretina ity ny tenany. Efa nisy efatra hafa namoy ny ainy, Malagasy tany Frantsa sy tany Belzika ny volana avrily teo.